Topnews:- Daawo Gaadiid iyo hub Al-Shabaab ka qabsadeen Dowladda Kenya - aqoonsiyo Saraakiil laga dilay
Friday May 23, 2014 - 22:25:51 in Articles by Super Admin
Waagacusub.info - Warbaahinta Waagacusub ayaa heshay Sawiro laga qaaday gaadiid iyo hub ay Maleeshiyadda argagixisada Al-Shabaab ka qabsadeen Ciidanka Dowladda Kenya.
Waagacusub.info - Warbaahinta Waagacusub ayaa heshay Sawiro laga qaaday gaadiid iyo hub ay Maleeshiyadda argagixisada Al-Shabaab ka qabsadeen Ciidanka Dowladda Kenya. Dukumiintiyada Warbaahinta Waagacusub waxaa ku jira aqoonsiga laba Sarkaal oo Ciidanka Kenya ka tirsan kuwaas oo kooxda Al-Shabaab sheegtay inay ku dileen dagaalkii Mandhera ku dhexmaray dableey taabacsan argagixisada Al-Shabaab iyo Ciidanka Kenya.
Baabuurta Ciidanka lagu qaado oo leh taarikada Kenya ayaa ka mida Gaadiidka ay Al-Shabaab ku qabsadeen dagaalkii Mandera ku dhexmaray iyaga iyo Ciiamadda Kenya.
Al-Shabaab ma sheegan inay maxaabiis ka qabteen Ciidanka Kenya hasse yeeshee wuxuu bandhigooda sawirada ku beegan yahay xilli uu sarkaal ka tirsan argagixisada Somalia oo lagu magacaabo Fuad Mohamed Khalaf sheegay inay dagaalkii gudaha Somalia u wareejiyeen gudaha Kenya .